Amai Mugabe Vokurudzirwa Kuyemura Mabasa neHunhu hwaAmai Muzenda
Nyamavhuvhu 24, 2017
Vagari veMasvingo avo vari pakati pekuchema gamba renyika, Ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiriri wenyika Amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakana kubva kumushakabvu uyo arumbidzwa nevazhinji munyika kuti aiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera Amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato reZanu-PF nemunyika. Mazuva apera Amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova mumwe musikana, Gabriella Engels kuSandton, Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvipe chiremera kumudzimai wemutungamiri wenyika.
Vataura ne Studio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa na Mbuya Muzenda. Amai Tarisai Hungwe vekwaMucheke muMasvingo vanoti nyika yarasikirwa na Mai chaivo uye vakurudzira Mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
“Chekutanga tinoti taraisikirwa na Mai Muzenda, vaive role model, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisine kuti anobva kubato ripi. Dai Mai Mugabe vakopawo hunhu hwa Mai Muzenda.”
Vamwe vazhinji vanoti Mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezve matongerwe enyika apo murume wavo achiri mupemyu vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana ne vatungamiriri venyika.
Mutauriri weNational People’s Party NPP, VaJeffreyson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazvininipise sa Mbuya Muzenda.
“Tine hurombo nekurasikirwa na Mai Muzenda avo vatinoziva samai vakatsiga, vakazvininipisa, kana mukaenda pachikoro cheMpandawana kwa Gutu ,vaipinza vana vazhinji chikoro, vakasara vachichengeta vana vavo vaMuzenda vaenda kunorwira rusunguko ."
Rambisai Mugova anoti Mbuya Muzenda ndoumwe wemadzimai evatungamirri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevachakabvu Amai Sally Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika pamwe na Mbuya Mafuyana mudzimai we mutevedzeri wemutungamiriri wenyika VaJoshua Nkomo.
“Tinoti tarasikirwa negamba guru vaiva mai vaive nehunhu vachida Nyika nemoyo wese. Vaive vasinganyadzisi nyika sevamwe vatinoona mazuva ano . Sevanhu veMasvingo tinoti tarasikirwa zororai murugare.”
Mbuya Muzenda vachemwa namapato ezvematongerwe enyika akasiyana siyana hutungamiriri hwavo hukavarumbidza vachiti vaisapindira nyaya vachitora mativi.
Mutungamiriri we MDC VaMorgan Tsvangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda muHarare nemusi weChitatu, apowo mutungamiriri we NPP Amai Joyce Mujuru vakarumbidzawo tsika dza Mbuya Muzenda.
Studio 7 haina kukwanisa kubata Mai Mugabe kuti vatipewo maonere avo papfungwa dzevanhu veMasvingo.
Mbuya Muzenda avo vakashaya nemusi weMuvhuro vasiya vana vatanhatu, vazukuru makumi maviri pamwe nevazukururwi gumi nevashanu
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika VaSydney Sekeramai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vari kuradzikwa kumarinda eHeroes Acre nemusi weMugovera.